‘Bandhig-Hibeedku Ma Sidan Baa!?’ Qalinka Sahra-Ladan Maxamed Cali | Saxil News Network
‘Bandhig-Hibeedku Ma Sidan Baa!?’ Qalinka Sahra-Ladan Maxamed Cali
Hargaysa (Saxil News.com)-Tacadiga Hibada loo geystay
Dhammaan Barnaamijyada aan kor ku soo xusay oo ah Barnaamijyo ay dadku ku soo bandhigaan Hibooyinkooda, waa Barnaamijyo aad looga tixgeliyo Adduunka, aadna looga jecel yahay. Barnaamijyadan waxa ka qaybgala Kumannaan qof halka Malaayiin kale kala socdaan ama ka daawadaan Shhaashadaha Warbaahinta (TV-yada) iyo Baraha Internet-ka.
Barnaamijyadan aad baa loo xiiseeyaa, waayo? Qaababka loo soo bandhigo oo aad u qurux badan iyo nidaamka ay u socdaan oo habaysan. Sababaha dadweynuhu ku xiiseeyaan waxa u wayn maadaama ay ka qaybqaadan karaan kala saarista oo codkoodu uu awood ku leeyahay barnaamijka.
Barnaamijyadan ayaa hadaba kolka la qabanayo waxa loo maraa hab iyo hannaan hufan oo midho dhal noqon kara taas oo ay ka mid tahay in marka hore la isla garto waxyaabaha hibo noqon kara iyo waxa aan noqon Karin waxa kale oo lagama maarmaan ah in qabashada barnaamij sidan oo kale ah loo sameeyo qorshe hawleed cad oo lagu kala wadayo hannaanka wax qabadka.
Sidoo kale, waa in lasoo xulo oo intaan dadka la horkeenin lagu qanco cidda barnaamijka ka qayb galaysa markaas kadib ayaa dalka oo dhan laga soo xuli karaa dadka garsoorka ka noqonaya barnaamijka kuwaas oo lagu soo xulayo aqoonta kartida iyo khibradda ay u leeyihiina qaybaha kala duwan ee hibooyinka bulshadu ku tartamayso, sida qof aqoon durugsan u leh qaab Metelaada iyo Masrixiyadda qof aqoon u leh Ciyaaraha iyo wixii la hal maala, qof aqoon u leh Luuqda iyo Codadka iyo ugu danbayn qof aqoon u leh Majaajilooyinka iwm.
Barnaamijyadani markii ay ka tisqaadeen waddamada adduunka kadib waxa bilaabay inay qabtaan, waddanka aynu jaarka nahay ee Jabuuti kaas oo dadka garsoorayey ahaayeen dad khibrad u leh kala saarridda tartamayaasha sidoo kalana goobta iyo qaabka wax qabadkuba ay aad u billaayeen.
Waxaa iyana kasoo ergistay oo bilaabay dawlad deegaaneedka (DDSI), kuwaas oo aan ka dhicin hab iyo hanaan wadista barnaamijyada adduunka ee bandhig hibeedyada, barnaamijkaas oo ay ula baxeen magac dhaqameed ka turjumaya waxa ay doonayaan Kali Got Talent
Barnaamijyadan ayaa waxa ka qayb qaata dhammaan dad waynaha, kuwaas oo codkooda ku darsada barnaamijka iyagoo isticmaalaya teleefanno, iimayllo iyo aaladaha la isticmaalo oo dhan.
Haddaba, waxa iyaguna u holoday inay ka hirgeliyaan waddanka Soomalilaan, wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta, dhaqanka iyo hiddaha oo isku hawshay qabsoomidda barnaamijkan, laakiin nasiib darro waxa ay ku hantaaqmeen, fashilna ku noqday dhammaan barnaamijka iyo qaab socodkisa taasoo ay sabab u ahayd qorshe la’aan khibrad la’aan iyo waliba diyaar garaw la’aan ka muuqda guud ahaan barnaamijka gaar ahaan guddida loo xilsaaray garsoorka.
Guddidan oo ah kuwo aan xeellad iyo xirfad toona u lahayn hibooyinka iyo waxa lagu xulo, sidoo kalana dhexdooda aanay ka muuqan wax isla jaanqaad ah iyo tix galin oo aad marar badan arkayso inaanay fahansaynba sida ay u shaqaynayaan dhanka kalana mararka qaarkood iyagu iskuba baxsanaya oo is qabsi iyo hadallo deelqaaf ah hawada isu marinaya iyagoo bulshadu daawanayso, Barnaamijka bandhig hibeedku, waa mid u baahan maskax, maal, wakhti iyo xirfad intaba.
Isku soo wada duub oo barnaamijka maalmahan lagu qabanayay wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaalilaan ayaa u muuqda inuu yahay mid aan lahayn wax ujeedooyin ah sidoo kalana ahaa uun mid lab lakac ah iyo waliba ku dayasho indho la,aan ah sidoo kalana aanay ka madhnayn magac raadis.
W/Q: Sahra Ladan Maxamed Cali
Ujeeddada iyo Dulucda Qoraalkani kama turjumayso Aragtida Bahda Warbaahinta Aftahannews, hase-yeeshee, xurmo, xishmayn iyo saamayn kasta oo taban ama togan oo uu leeyahay waxay gaar u tahay oo ka masuul ah qoraaga Maqaalkan ee magiciisu ku qoran yahay dhammaadka iyo bilawga qormada. Balse keliya Masuuliyadda Aftahan waa in ay gubbiso aragtida macquulka ah ee qoraaga si aynu u dhiirrigelinno doodaha, fikradaha iyo aragtiyaha kala duwan ee ay qaybaha Bulshada iyo Qalin-maalku is-weydaarsanayaan, kuana cabbirayaan hadba marxaladda taagan iyo waxay dareemayaan.